Resadresaka nifanaovana tamin'i Carlos Quintanilla - QGIS - Geofumadas
Desambra, 2020 Engineering, fanavaozana, qgis
Miresaka amin'i Carlos Quintanilla, filohan'ny Fikambanana QGIS, izay nanome anay ny dikanteniny momba ny fitomboan'ny fangatahana asa mifandraika amin'ny jeografia, ary koa ny andrasana amin'izy ireo amin'ny ho avy. Tsy tsiambaratelo fa mpitarika ara-teknolojia maro amin'ny sehatra maro -fiorenana, injeniera ary ny hafa-, "TIG dia fitaovana transversal izay ampiasain'ny sehatra maro kokoa izay mahita azy ireo ho fitaovana mandaitra handraisana fanapahan-kevitra amin'ireo lafin-javatra misy fiatraikany amin'ny faritany ireo, Amin'ny ho avy dia hahita orinasa maro kokoa izay mampiasa ny TIG ho fitaovana miasa izy, ho lasa programa miompana amin'ny birao mandeha ho azy izay miha-mahazatra hatrany amin'ny solosaina miasa ”.
Ny fampidirana ny TIG amin'ny faritra maro dia misy resaka momba ny fampidirana ireo fifehezana hahatratra ny fanamafisana ny tetikasa, ka hoy i Quintanilla fa amin'izao fotoana izao dia ilaina hatrany ny fandraisan'anjaran'ny manam-pahaizana amin'ny taranja maro izay mampiasa TIG, maritrano, injeniera. , tontolo iainana, dokotera, mpanao heloka bevava, mpanao gazety sns.
Ho fanampin'izay voalaza etsy ambony, ny GIS maimaim-poana dia tsy maintsy namboarina mba hamaliana ireo filàna miseho, ary haharaka ny fandrosoana ara-teknolojia, ny GIS maimaim-poana dia antoka iray amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny rindranasa sy ny tranomboky, mifandray mivantana amin'ny Ao amin'ny CRM, efa azo atao ny manao fampiasana trano famakiam-boky artifisialy, ary ampahany izany noho ny fisian'ireo programa lozisialy maimaim-poana.
Fantatray fa ny vanim-potoana niomerika faha-4 dia mitondra miaraka aminy tanjona hamolavolana tanàna maranitra atsy ho atsy. Saingy, amin'ny fomba ahoana no avelan'ny GIS fitantanana mahomby ny tanàna marani-tsaina? Hisy ny tanàna mahomby rehefa tratra ny fifamatorana eo amin'ny fampiharana rehetra, ny fampiharana ny GIS maimaim-poana dia mamela ny tanàna ho hendry. Ny tanàna marani-tsaina dia ho rehefa tsara kalitao ny angona ary ampifanarahana amin'ny filan'ny olom-pirenena ny fitaovana.
Quintanilla, dia nanondro fa ny fampidirana BIM + GIS dia tsy mety, fa mety raha misy ny fifandraisana eo amin'ny tontolo roa dia ilaina ny hahazoana ekipa fampandrosoana ny teknolojia BIM izay mahalala ny fiasan'ny GIS hahafahan'izy ireo miara-miaina. Ny fampidirana ireo rindranasa roa ireo dia hitondra tombony amin'ny hevitry ny tahiry amin'ny alàlan'ny fampidirana ny geometry sy ireo toetra azo avy amin'ny GIS ary azo ampiasaina amin'ny BIM.
Toy izany koa, nahita ny fahalianana manerantany amin'ny fananganana tanàna marani-tsaina, nanontany izahay raha namorona fitaovana ho an'io tanjona io ny Fikambanana QGIS. Nanantitrantitra i Quintanilla fa tsy mahafantatra fitaovana azo ampiasaina hamoronana tanàna marani-tsaina izy, saingy QGIS sy ireo add-on mihoatra ny 700 dia fitaovana mahomby hananana tanàna marani-tsaina. Ny tombony lehibe amin'ny QGIS amin'ny mpifaninana aminy dia ny add-on 700 mahery azo apetraka, ankoatry ny fitaovana marobe izay efa misy QGIS ho fenitra. Mora be ny mamorona plugins vaovao manompo teknisianina sy mpampiasa QGIS tsaratsara kokoa.
Momba ny fanekena sy ny fandraisana ny vokatra QGIS Association, ny filoha dia nilaza mazava taminay fa rindrambaiko maimaimpoana ny QGIS ary ao ambadik'ity vondrom-piarahamonina ity dia misy orinasa maro, satria misy fitaovana vaovao misy fiantraikany amin'ny ivon'ny QGIS tapaka ao anaty komity teknika, ao amin'ny izay manana solontena i QGIS Spain. Raha, amin'ny plugins, ny mpamorona dia manana fahalalahana tanteraka hamorona izay ilainao. Avy amin'ny fikambananay sy ny olon-kafa rehetra dia manana tanjona izahay amin'ny fanaparitahana ny programa QGIS amin'ny fihaonambe, famelabelaran-kevitra ary forum izay fihaonan'ny matihanina avy amin'ny sehatry ny GIS. Ny fanehoana ny fahombiazana dia ny fomba tsara indrindra hampianarana ireo mpampiasa vaovao hampiasa QGIS .
Mikasika ny fenitra mifandraika amin'ny fiaraha-miasa, Quintanilla dia nanambara fa ny ankamaroan'ny fenitra dia avy amin'ny OGC (Open Geospatial Consortium), QGIS dia manana fiantsoana hifanaraka amin'ny fenitra misy anao, ka mora be ny manaraka azy ireo ary manatsara ny fifandraisan'ny rehetra. eo anelanelan'ny rindranasa sy ny mpizara. Ny programa ara-barotra sasany amin'ny alàlan'ny default dia mampiasa endrika tsy miankina ary avy eo mampifanaraka ny fenitra, QGIS mampifanaraka ny fenitra avy amin'ny faka, dia tonga ao anatiny. Angamba serivisy sarintany (WMS, WFS, WFS-T,) no be mpampiasa indrindra, fa misy kosa ny hafa izay manan-danja ihany koa, metadata, endrika data (gml, GPKG, sns).
Araka ny fampiasana fitaovana finday izay manome fampahalalana tena manokana momba ny mpampiasa, izay mety hanimba na hahasoa ny olom-pirenena sy ny manodidina azy, ny filohan'ny Fikambanana QGIS dia nilaza fa sabatra roa lela io raha ampiasaina amin'ny fomba tsy marina sy tsy misy ny angona. hajao ny fiainanao manokana. Na izany aza, angon-drakitra mahaliana tokoa izy ireo, ary ao anatin'ny sehatry ny lalàna hatrany, dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny tanjona siansa sy mahasoa ho an'ny olom-pirenena izy ireo. Open data, OpenData, dia angona ahafahantsika manao fandalinana tena mahaliana. OpenStreetMap dia ho ohatra tsara.
Ho fanampin'izay, manontany ny hevitrao izahay momba ny maha-zava-dehibe ny fandaharana ho an'ny mpandalina GIS amin'ity vanim-potoana nomerika faha-4 ity. Miankina amin'ny famaritana ny mpandalina GIS izany, raha mamaritra ny mpandalina GIS ho toy ny matihanina izay tsy maintsy manome valiny amin'ny olan'ny GIS sarotra izahay, dia tena ilaina tokoa ny Eny. Na izany aza, raha faritan'ny mpandalina azy ireo ho matihanina izay mamakafaka tetikasa sy mandray fanapahan-kevitra miaraka amin'ny ekipa miasa, dia tsy zava-dehibe ny fahalalan'ilay mpandalina ny fomba fandaharana, fa misy olona iray ao amin'ny ekipa kosa ilaina.
Na dia ho mpandalina tsara aza, na dia tsy programmer manam-pahaizana aza, dia tsara ny mahafantatra ny fahafaha-manao, ny ezaka tafiditra amin'ny fanombanana ny asa takiana amin'ny fanomanana asa ary amin'izany fanapahan-kevitra momba ny fandrindrana ny tetikasa.
Tsy ilaina izany, fa tena soso-kevitra tokoa, tsy ilaina ny fandaharana, misy fitaovana maro azo tanterahina raha tsy misy fahalalana momba ny fandaharana, fa amin'ny tetikasa somary sarotra dia tena ilaina foana ny mandahatra asa sasany. Saingy ilaina hatrany izany ary matanjaka kokoa ny fananana teknisianina mahay mamolavola programa sy manangona ekipa multidisiplinaly.
Araka ny voalazan'i Quintanilla, tena tsara ny fanjifana sy ny fianarana ny geotechnologies, fampianarana GIS an-tserasera maro no nampianarina, maro no nanararaotra nisoratra anarana ho an'ireo fampianarana manararaotra ny fisian'ny fotoana misy. Mikasika ny fiaraha-miasa, amin'ity taona ity dia tsy misy avy amin'ny QGIS Spain, mbola mitohy amin'ny taon-dasa ihany izy ireo, na eo aza izany dia mbola tetikasa ho an'ny OSGeo ny QGIS international https://www.osgeo.org/projects/qgis/
Tetikasa vaovao avy amin'ny fikambanana no hanangana tranokala vaovao an'ny Fikambanan'ny mpampiasa QGIS Spain (www.qgis.es) maoderina kokoa sy mahomby kokoa, mba hahafahan'ny mpikambana mampiasa azy hahalalany ny zavatra ataontsika avy amin'ny fikambanana sy ny toeram-pivoriana ho an'ny mpikambana ary koa ho an'ireo tsy mpikambana izay mangoraka ny tetikasa QGIS.
Tena faly izahay fa ny tetikasa teraka tany Espana sy niara-niasa tamin'ny fikambanana dia nandray anjara tamin'ny fanomezana ho an'ny QGIS international, toy ny GISWater, fitaovana iray fitantanana hendry ny loharano, rano fisotro, fidiovana ary ranonorana.
Ny filankevitry ny tanànan'i Barcelona dia hitohy ho mpikambana ao amin'ny fikambanana, io no hany fitantanan-draharaham-panjakana izay nanao ity dingana ity. Te hiresaka ihany koa aho ny fandraisan'anjaran'i Víctor Olaya, mpamorona QGIS, ary mpanoratra ny Boky GIS, Víctor dia nanome ny tombam-bidiny ara-toekarena tamin'ireo boky vita pirinty amidy tamin'ny Fikambanan'ny mpampiasa QGIS Spain
Mitombo ny fanantenana amin'ny ho avin'ny TIG maimaim-poana ary mihasarotra ny manamarina ny fampiasana fitaovana ara-barotra, izany dia hampitombo ny sehatry ny TIG maimaim-poana, tsy maintsy miomana sy miasa miaraka isika mba tsy hamerina ezaka. Noho io antony io, ny fikambanana toa antsika dia manan-danja amin'ny fitomboana ara-drariny sy ara-drariny kokoa amin'ny sehatra.
Nalaina tao Gazety Twingeo Fanontana faha-5.
Previous Post«Previous Autodesk dia manolotra ny "The Big Room" ho an'ny matihanina amin'ny fanamboarana
Next Post Nanaovan'i Esri sonia ny fifanarahana fahatakarana niaraka tamin'ny UN-Habitatmanaraka »